Nnukwu Ụlọ Ahịa Funlife Plaza bụ ụlọ ezinaụlọ ezinụlọ maka oge ezumike na agụmakwụkwọ ụmụaka. Aims ike a ọduọ ụgbọ ala corridor maka ụmụaka na-agba ịnyịnya ụgbọala n'oge nne na nna na-azụ ahịa, a osisi ụlọ maka ụmụaka lezienụ ma kpọọ n'ime, a "lego" n'uko na zoro ezo aha nnukwu ụlọ ahịa na-akpali ụmụaka pụrụ ichetụ n'echiche. Mpempe ọcha dị mfe na-acha ọbara ọbara, odo na acha anụnụ anụnụ, hapụ ụmụaka ka ha see ya na agba ya na mgbidi, ala na ụlọ mposi!
Ime Ime Ihe oru a di na Suzhou, nke a ma ama nke oma site na nhazi ubi ndi China. Onye mmebe ahụ gbalịrị ijikọ ma nghọta ọgbara ọhụụ ya yana asụsụ Suzhou. Nhazi ahụ na-ewepụta nkọwa sitere na ụlọ ọrụ Suzhou nke ọdịnala site n'iji mgbidi efere na-acha ọcha, ọnụ ụzọ ọnwa na ogige ogige dị mgbagwoju anya iji tụleghachi asụsụ Suzhou n'asụsụ nke oge a. Ejila ụlọ ọrụ emegharịrị ụlọ, ejiri achara, na ụdọ ahịhịa na ụmụ akwụkwọ, sonye, nke nyere ohere mmụta pụrụ iche.
Ebe A Na-Eme Ihe Ngosi
Ebe A Na-Eme Ihe Ngosi Ebe a na-eme ihe ngosi: n'ime ụlọ ebe a na-eme ihe ngosi, akpụkpọ ụkwụ ọzụzụ na akụrụngwa egwuregwu, nke eji teknụzụ ntụtụ eji ya, bụ nke a na-egosi. Ebe a, dị ka arụpụtara ya na ebu na-agbanye. N’ime usoro eji arụ ebe ahụ, iberibe ụlọ dịka a na-ejikọkọta ya na mkpụkọ injection iji mepụta dum. Ngwakọta dị egwu nke dị n'uko ahụ, na-eme ka ọhụụ ahụ ghara ịdị nkọ.
Boutique & Showroom Ewupụtara obere ụlọ ahịa dị egwu ma jiri obere obere, ụlọ ebe a na-edebe ihe nkiri na ebe a na-edebe ihe ọkụkụ nke Piotr Płoski hiwere. Ọrụ a butere ọtụtụ ihe ịma aka, ebe ọ bụ na batrị dị n'okpukpu nke abụọ nke ụlọ mmemme, na-enweghị windo ụlọ ahịa ma nwee mpaghara naanị 80 sqm. Nke a bụ echiche nke ịdọgharị mpaghara ahụ, site na iji ohere ahụ dị na mbara ala yana ala ụlọ. A na-eme ndị mmadụ obi ụtọ, na-eme ka mmadụ na ibe gị dịrị n'udo, n'agbanyeghị na a kpọchiri arịa ụlọ n’ezie n’elu ụlọ. Ezubere ụlọ ahịa ihe ize ndụ megide iwu niile (ọ na-emegide ike ndọda). O zuru oke gosipụtara mmụọ nke ika ahụ.
Ile Ọbịa Ihe oru ohuru nke elu igwe a bu uzo mbu nke ihe nlezighari ohuru nke ndi AC Milan na FC Internazionale tinyere ndi Obodo, na eburu n’uche igbanwe ihe egwuregwu San Siro n’ime ulo ihe eji enyere otutu aka ikwado. ihe omume dị mkpa Milano ga-eche n'oge EXPO na-abịanụ 2015. Na-esote ihe ịga nke ọma nke ọrụ skybox, Ragazzi & Partners arụpụtawo echiche nke ịmepụta oghere ọhụrụ nke oghere ile ọbịa na elu nnukwu nnọkọ San Siro Stadium.
Obere Obere Ọfịs
Obere Obere Ọfịs A na-adọwa ime ụlọ ahụ mma, ma ọ bụghị obere ọrụ. A na-emesi oghere oghere dị iche iche ike site na ahịrị dị ọcha, nnukwu oghere na-adọrọ adọrọ nke na-enye ohere ka ọtụtụ ụbọchị eke ụbọchị, na-eme ka ahịrị na ụgbọ elu bụrụ ihe dị mkpa na ihe eji achọ mma. Enweghị akụkụ aka nri kpebiri na ọ dị mkpa ịnwe elele dị omimi nke oghere ahụ, ebe nhọrọ nke palette agba dị mfe jikọtara ya na ihe dịgasị iche iche na ederede na-enye ohere maka ịdị n'otu na ịdị n'otu ọrụ. Ihe a na-emechighị emebi na-agwụ elu na mgbidi iji gbakwunye ọdịiche dị n'etiti dị ọcha-isi na isi ike.
Baan Igbe Nri Abalị Satọdee 18 Septemba
LOTUS Ụlọ Ịsa Ahụ Fraịdee 17 Septemba
Electra Faucets Tọọzdee 16 Septemba
Nnukwu Ụlọ Ahịa Ime Ime Ebe A Na-Eme Ihe Ngosi Boutique & Showroom Ile Ọbịa Obere Obere Ọfịs